आदरणिय चोर फटाहाहरु,......... सबैले एक पटक पढ्नै पर्ने - Muldhar Post
आदरणिय चोर फटाहाहरु,……… सबैले एक पटक पढ्नै पर्ने
मीनबहादुर पण्डित २०७४, २८ मंसिर बिहीबार 435 पटक हेरिएको
प्राय हरेक ज़सो मान्छे धर्म गर्न मन्दिर जाने गर्दछन वा घर मैं भए पनी सानो तीनो मन्दिर राखेर पूजा गर्ने गर्दछन । अनि आफ़ू र आफ़नाको कुसल मंगल र प्रगतिको कामना गर्दछन ।
अझ मुक्तिनाथ गोसाई-कुण् लगायत तिनिहरू नपुगेको कुण्ड हुदैन । तर तिनै मान्छे जब आ-आफ्नो काम र पेसामा जांछन, तब कमिसन ठगी र भ्रष्टाचार आदि अनेक खाले अपराध गर्ने गर्दछन, वा भनौ जानी नजानि पाप गर्दछन । रबी लामिछनेले सीधा कुरा जनता मार्फ़त त्यस्ता ठग र पापीहरूलाइ अलि कता भए पनी पाप गर्न बाट सचेत गराऊँन र रोक्न सफल भएका छन । त्यसैले चोर फटाहहरूले रबिलाइ गाली होइन ताली दिनु पर्छ । अनि तीनले आफ्नो गल्ती र कमज़ोरी सुधार्न पनी सक्नु पर्दछ ।
अनि मात्र मन्दिर र घरमा पूजा गरे भंदा धेरै धर्म हुनेछ । त्यसैले त रबी भन्दैछन तीम्ले पापले कमाएको मित्र भंदा मलाई मेरो पुण्यले कमाएको दुश्मन नै प्यारा छन । भ्रस्टहरुले के बुझ्न जरुड़ी छ भने तिमीहरुले गरेको भ्रस्टचारले गर्दा काठमान्डौको सडकको धुवा धुलोको अशर तिमि, तिम्रा आफन्त र तिम्रो आउने पुस्तालाइ पनि हुनेछ ।
तिमि पनि यहि बायुमण्डलको सास लिने हौ र लिरहेका छाैं, त्यसैले तिम्रो पनि फोक्शो नबिग्रियला भन्न सकिन्न । तिम्रो आफन्त पनि सडक दुर्घटनामा परेर नमर्लान भन्न सकिन्न । होइन यो प्रदुषणबाट बच्नु पर्छ भन्ने लाग्छ भने कि राम्रो बाटो बनाउ कि सगरमाथा चड्दा अक्सिजनको सिलिन्डर बोके जस्तो अक्सिजनको सिलिन्डर बोकेर हिड्ने गर ।
रबि लामिछाने “सीधा कुरा प्रधानमन्त्री”संग कार्यक्रम चलाउदा पनी अत्यंतै लोकप्रिय भएको थियो, तर सरकार बदलेसंगै प्रचण्डले रबीलाई हटाए पछी त्यों कार्यक्रम कता हरायो थाहा भएन । त्यो कार्यक्रमले केपी ओली कस्ता नेता हुन भनेर जनता माँझ चिनायो बुझायो । साथै केपी ओली जनताका पीर मर्का प्रत्यक्ष सुने र त्यसलार्इ समाधान गर्न चाहने र सक्ने नेता रहेछन भनेर प्रस्ट बुझायो । जसले गर्दा ओली र एमाले सरकारको लोक प्रियता बडन पुग्यो, फल स्वरूप देसमा बहुमतको स्थिर सरकार आउन ठूलो मद्दत गर्यो ।
त्यसैले सीधा कुरा प्रधानमंत्री संग कार्यक्रम फेरी सुरु हुनुपर्दछ, तर नेपाल टेलिभीजन बाट होईन, न्यूज़ २४ टीवी बाट । किनकी नत्र अहिलेको रबीको कार्यक्रम सीधा कुरा जनता संग बन्द हुन पुग्दछ # । तर प्रधानमंत्री निजी टेलीभिजनमा जान मील्छ की मिल्दैंन त्यों क़ूरा भने बिचार गरिनु पर्दछ । दुबै कार्यक्रमको उद्देश्य एउटै हो, तर नीउज २४ मा चली रहेको कार्यक्रम बन्द गर्नु पनी ठीक हुदैंन । सीधा कुरा प्रधानमंत्री संग कार्यक्रम फेरी चलाइयोस । तर त्यसलाइ कता र क़सरी ब्यावस्थापन गर्ने हो भन्ने कुरा रबिले मिलाऊँन नसक्लान जस्तो लागदैन ।
त्यसैले केपी ओली ज्युलाई बिनम्र अनुरोध छ, मन्त्रीमण्डल बिस्तारको काम सकिए पछी सीधा कुरा प्रधानमंत्री संग फेरी चलाउनु होस । त्यसो भयों भने मात्र आवाज़ बिहिनहरूको आवाज़ बनेको कार्यक्रम अझ बलियों हुनेछ । यदि कुनै कारण बस यो कार्यक्रम चलाऊँन नसके रबिलाइ भर पर्दों सुरक्षा उपलब्ध गराइयोस । सरकारले गर्नु पर्ने काम रबिले रिस्क मोलेर गरी रहेका छन । त्यसैले की सरकारी बेथिति, अपराध र भ्रष्टचार खत्तम गर, की रबिलाइ सुरक्षा देउ । नत्र चोर फटाहहरूको मनोबल झनै बड्ने छ । त्यसको ज़िम्मेबार केबल सरकार र सरकारी निकाए हुने छन ।
सरकारले एकजना कमाण्डो उपलब्ध गरावोस बरू त्यसको तलब भत्ता हामी बिदेश बस्नेहरू चन्दा उठाएर पठाऊँन तयार छौ । होईन भने त्रिम्रा २ लाख जती (ससत्र, नेपाल प्रहरी र आर्मी गरेर) सुरक्षा जवानलाई घाम तापेर तलब भत्ता ख़ूवाऊ । एदी देश बनाउने हो भने हरेक जवान सांती सुरक्षा र देश विकासमा काम आऊनु पर्दछ ।
त्यती बेला सीधा कुरा प्रधानमंत्री संग कार्यक्रम मार्फत पनि केपी ओली लोकप्रिय भएकाले जनताले केपी ओली फेरी प्रधानमन्त्री भएको हेर्न चाहेर नै एमाले र बाम गठबन्धनलाई बहुमत दिएका हुन । सीधा कुरा प्रधानमंत्री संग कार्यक्रम नहुने हो भने हुने वाला प्रधानमंत्री ज़्यु कसरि जनताको गुनासो सुन्नु हुंछ ? क़सरी जनताको पीर मर्का थाहा पाउनु हुंछ ?
तपाईलाई जनता संग सम्पर्कको सजिलो माध्यम यही हुन सक्छ । किनकी ज़िम्मेवारी र कार्य ब्यस्तताले गर्दा दूर दरार वा सबै ठाऊमा पुग्न सम्भव हुदैन । तर बास्तबिकता थाहा पाऊन जनता संग प्रत्यक्ष कुरा हुन ज़रूरी हुंछ । तर सर्ब साधारणले प्रधानमंत्री जस्तो व्यक्ति संग सीधा सम्पर्क गर्न सकदैनन । त्यसैले साच्चिकै सफल सरकार चलाउने भए यी क़ूरा बिचार गर्नु होला । किनकी चोर फटाह चिन्ने खोज्ने र तीनलाई कारबाही गर्न सकीएन भने जनताले सुसासन पाऊन सक्दैनन । सुशासन बिना प्रगति र विकास हुन पाउदैंन । फलस्वरुप सरकार नै असफल हुन पुग्दछ । त्यसैले सीधाकुरा प्रधानमंत्री संग चलाउनुको विकल्प छैन ।
मीन बहादुर पण्डित, हाल दुबई बाट